पशुपति मन्दिरमा यसरी नाचेर रमाइलो गरेकी थिइन् अभिनेत्री जेनी कुँवरले, के भएको थियो उनलाई ? (भिडियो हेर्नुस्) – Ramailo Sandesh
पशुपति मन्दिरमा यसरी नाचेर रमाइलो गरेकी थिइन् अभिनेत्री जेनी कुँवरले, के भएको थियो उनलाई ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । नायिका जेनी कुँवरको निधनले नेपाली फिल्म क्षेत्रले शोक मनाइरहेको छ । उनले आफु बसेको अपार्टमेन्टमै देहत्याग गरेकी छन्। काठमाडौं थापागाउँस्थित सनराइज सिटी अपार्टमेन्टमा उनले बिहिबार राति देहत्याग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘उनको शव उक्त अपार्टमेन्टमा भेटिएको हो। थापागाउँ स्थित उनी सनराइज सिटीको अपार्टमेन्टमै बस्दै आएकी थिइन्।
उनको निधन हुनु अघिका केही भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । धेरैजसो पशुपति मन्दिर आसपासमा भेटिने उनी त्यहाँ निकै रमाइलो पल पनि विताएकी थिइन् । भजन किर्तन लगायत धार्मिक काममा सकृय हुने उनी पशुपतिनाथ मन्दिर पनि महामारीका कारण बन्द भएपछि उनको सक्रियता पनि घटेको हुनसक्छ । अहिले उनका पुराना भिडियो भाइरल भएका छन् ।
एमालेको १० बुँदे सहमतीले लियो नयाँ मोडः सर्वोच्चबाट एमालेका सांसद्हरुको हस्ताक्षर फिर्ता !